Photography – Tagged "Camera Accessories" – ICT.com.mm
Kase U Shape Lens ClipK25,000 K20,000-20%
Kase Magnetic Lens ClipK25,000 K20,000-20%
Kase Lens ClipsK25,000 K20,000-20%
GoPro The Frame For HERO7/6/5/2018K10,836
GoPro Bite Mount And Floaty For HERO9 BlackK88,651
Kase U Shape Lens Clip
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ High quality lens clips for Kase lenses. Multiple designs to fit your smartphone.
Kase Magnetic Lens Clip
Kase Lens Clips
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: AAFRM-001 Replacement mounting frame Smallest, lightest way to mount your GoPro Minimalist design for compact, low-profile mounting Enables optimal audio capture during low-speed activities Allows full-time...
GoPro Bite Mount And Floaty For HERO9 Black
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ASLBM-003 Easy to use for hands-free POV capture in any environment Includes Floaty, an easy-to-spot accessory that keeps HERO9 Black afloat1 Wraparound design of Floaty allows...
GoPro Travel Kit With New Magnetic Swivel Clip
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: AKTTR-002 Get an awesome deal on two versatile accessories perfect for capturing your journeys Shorty (Mini Extension Pole + Tripod) extends up to 8.9in (22.7cm) and...
GoPro Rollcage Protective Sleeve And Replaceable Lens For HERO8 Black
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: AJFRC-001 Protective silicone sleeve safeguards the camera body from scratches and impact Sleeve allows easy access to camera buttons, screens and folding fingers Sleeve won’t interfere...
GoPro HERO8 Black Sleeve And Lanyard (Turtle Green)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​AJSST-005 Adjustable lanyard keeps your GoPro ready for action—great for wearing around your neck or attaching to your gear Mount your camera with the sleeve on,...
GoPro HERO8 Black Sleeve And Lanyard (Sand)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​AJSST-006 Adjustable lanyard keeps your GoPro ready for action—great for wearing around your neck or attaching to your gear Mount your camera with the sleeve on,...
GoPro HERO8 Black Sleeve And Lanyard (Hyper Orange)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​​AJSST-004 Adjustable lanyard keeps your GoPro ready for action—great for wearing around your neck or attaching to your gear Mount your camera with the sleeve on,...
GoPro HERO8 Black Sleeve And Lanyard (Bluebird)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​AJSST-003 Adjustable lanyard keeps your GoPro ready for action—great for wearing around your neck or attaching to your gear Mount your camera with the sleeve on,...
GoPro HERO8 Black Sleeve And Lanyard (Blackout)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​AJSST-001 Adjustable lanyard keeps your GoPro ready for action—great for wearing around your neck or attaching to your gear Mount your camera with the sleeve on,...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​ACCPS-001 Replacement lens caps for MAX Protect the lenses of your MAX when not in use, or protect your non-shooting lens when capturing in HERO mode...
GoPro Grip Extension Pole With Tripod For HERO And MAX 360 Cameras
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​ASBHM-002 Can be used asacamera grip, extension pole or quick-deploy tripod Extendable from9to 22in (23 to 56cm) Extension pole locks into position...
GoPro HERO9 Black Camera Sleeve With Lanyard (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​ADSST-002 Silicone Protective Anti-Scratch Cover Leaves Access to Ports, Controls & LCDs Neck-Worn Lanyard Material Sleeve: Silicone The GoPro Sleeve + Lanyard set for HERO9 Black features...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ​ADFMD-001 Built-in directional mic highlights voice audio and reduces ambient noise Tough, weather-resistant construction withstands the elements2cold-shoe mounts to attach your favorite lights, mics...
GoPro ARMTE-003-AS Smart Remote
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ARMTE-003-AS Delivers full remote control of all camera functions, including shutter, on/off and settings Add HiLight Tags to mark key moments while recording, or access the Settings/Tag...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Conveniently charge two GoPro batteries simultaneously with this Dual Battery Charger and spare 1720mAh lithium ion battery for your GoPro. It charges via most USB ports. For...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Use this 1720mAh lithium-ion rechargeable battery asaspare or replacement battery for your GoPro. 1720mAh lithium-ion rechargeable battery Use asaspare or replacement battery for...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Waterproof, wearable and mountable, The Remote is made tough for any adventure. It uses Bluetooth® Low Energy for maximum battery life and easy pairing with your camera....
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Max out your stabilization and field of view with the Max Lens Mod. It instantly upgrades your HERO9 Black with Max HyperSmooth for unbreakable video stabilization up...
UBIQUITI G3 Camera IR Range Extender (UVC-G3-LED)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Extends IR Range Up to 25 m (82 ft) Weather Resistant for Outdoor Use Powered and Controlled by the UniFi Video Camera LED Ring houses six high-intensity...
Dahua PFM907 Integrated Mount Tester
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Support IP, HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS Highly compatible with ONVIF protocol POE power supply/receiving & 12V/2A power output 7”TFT HD capacitive touch screen(1920*1200) Two replaceable polymer lithium batterys 18.5Wh*2 Support...
Dahua Integrated Mount Tester (PFM905)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 4" IPS screen with 800 x 480 resolution and 16.7 million color support. It supports audio as well as RS485 control signals. For better visibility while using...